ATSIMO ANDREFANA : Vita ny fifanarahana hiadiana amin’ny fanondranana an- tsokosoko ny harem-pirenena
Notanterahina, ny talata maraina teo, tao amin’ny hotel Moring ny fifanarahana izay narahina fanaovan-tsonia, mba hiadiana amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena, ka isan’izany ny harena an-kibon’ny tany, ny harena anaty ala sy anaty ranomasina, ny hazo sarobidy, ireo biby maro samy hafa, toy ny sokatra, ary ny ankibon’ny tany toy ny safira ny vatosoa maro samy hafa ary ny volamena. 17 mai 2017
Ny avy ao amin’ny bianco no nitarika izany ka nandraisan’ireo sehatra rehetra mety handalovan’ny kolikoly eo amin’ny fanondranana ny harem-pirenena anjara, izay nahitana ny avy ao amin’ny Fitsarana, Polisim-pirenena, Zandarimaria, Fitaterana, Fadin-tseranana, ireo minisitera rehetra misahana ny harem-pirenena, ny avy ao amin’ny Serasera, ary Madagascar national Parcs, ny WWF.
Nataon’ireo rehetra sonia ny tapaka tamin’ ny fifanarahana ka lasa fifanarahana hiadiana amin’ny kolikoly, ka tsy hisy ny fanondranana antsokosoko ireo harenan’ny Malagasy. Nasian-dresaka ihany koa ny fahatratrarana ireo sokatra telonjato mahery, izay tratra any Malaizia, ary ny maro hafa koa. Inoana izany fa hihena ny fanondranana an-tsokosoko, ny harem-pirenena raha ny aty amin’ny Faritra Atsimo Andrefana no asian-teny, ka raha sanatria misy izany dia ny iray amin’ireo izay nanao Sonia no mety nahatonga izany. Homena ny tsirairay ny taratasy mirakitra ity fifanekena ity, ary haparitaka ihany koa amin’ireo haino aman-jery rehetra.